Accueil > Gazetin'ny nosy > Noho ny fizirizirian’ny mpitondra: Mikatso ny fampianarana eny amin’ny oniversite
Noho ny fizirizirian’ny mpitondra: Mikatso ny fampianarana eny amin’ny oniversite
Nanao ny fivoriambeny teny amin’ny oniversiten’Ankatso ny alakamisy teo ny mpikambana ao amin’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka-mpikaroka mpampianatra (Seces) eny amin’ny oniversite, ho an’ny sampan Antananarivo. Nisy ny fanaovana tatitra momba ireo fitakiana nataon’ny sendika Seces tamin’izany.
Voalaza tamin’izany ny fitakian’ny SECES Sampana Antananarivo, toy ny fanatanterahana tsy misy hatak’andro ny fandoavana ny tambim-pikarohana ho an’ireo « Retraités chercheurs ». Voambaran’io tatitra io fa “efa nampidirin’ny fanjakana foibe tao amin’ny tetibolan’ny ministera mpiahy izany nanomboka ny volana janoary 2016 ary tokony ho efa nisitrahin’ireo « Retraités chercheurs » nanomboka tamin’io daty io”. Ny fanampim-panazavan’ny mpanao tatitra ny naamarihany fa “efa saika nahavita ny fivorian’ny « Commission de validation» avokoa ny isaka ny toeram-pampianarana rehetra, ary efa misy ny nanatitra izany an-tànana tany amin’ny Ministera mpiahy, ka nilaza fa handray ny andraikitra manandrify azy araka izay haingana indrindra ny tompon’andraikitry ny ministera”. Hatreto anefa dia poaka aty izany, hoy ity sendika Seces ity.
Isan’ny takian’ity sendika ity koa ny famoahana didim-panjakana sy didim-pitondrana mifanaraka amin’ny rafitra LMD, izay mamaha tsy misy tomika ny olana momba ny asa fampianarana sy fikarohana manerana ny Oniversite miankina amin’ny fanjakana sy ireo Foibem-pikarohana nasionaly, anisan’izany ny fetr’ora tsy maintsy iasana, ny fetran’ny mpianatra azo tarihina mandritra ny « Encadrement », ny fetran’ny ora fanampiny azo sitrahina, ireo zo sy hasina mifandraika amin’ny andraikitra isan-tsokajiny, ny karazana asa fampianarana sy fikarohana azo hatao,…sns
Araka ny tatitra dia misy ireo mpampianatra mpikaroka ambara hoe « en maintien d’activités » satria anisan’ny kitro ifaharan’ny fampianarana sy fikarohana amin’ireo toeram-pampianarana na Foibem-pikarohana kanefa mbola afaka manohy tsara ny asany, izay tapaka karama ny volana febroary 2018 lasa teo. Misy koa ireo oniversite miankina amin’ny fanjakana ankoatra an’Antananarivo izay efa nisitraka manontolo ny « Heures Complémentaires » taona 2015-2016 (1ère et 2ème tranches) no sady 125 ora ny « Obligation de service » nampiharina taminy, hoy hatrany ny resaka nivoitra tao amin’ity fivoriambe ity. Manginy fotsiny ireo nihoatra ny 4000 ora, ary nisy ny nahatratra hatramin’ny 8000 ora aza, kanefa dia nandeferan’ny ministera mpiahy ny fandoavana azy raha toa ka mifanohitra amin’izany ny eto Antananarivo (1ère tranche 2015-2016 ihany no naloa ary noferana 1500 ora no azo sitrahina).
Tsy latsa-danja noho izany koa ny fisian’ireo mpampianatra-mpikaroka mitaky ny zony voafaritry ny Lalàna manan-kery (Convention internationale de travail, Convention internationale des droits de l’homme, Constitution de la 4ème République de Madagascar, Code de travail, Loi 2003-008, Loi 2003-011, Loi 95-023, DECRET N° 96-728, Circulaire N° 063 – MFPTLS/2012,…) no nahazo fandrahonana sy fampitahorana tamin’ny Lehiben’ny Toeram-pampianarana iray.
Manoloana ireo rehetra ireo ary dia nandray fanapahan-kevitra ny Fivoriambe fa “rehefa tsy namaly ny fitakiana ny zo sy hasin’ny mpampianatra-mpikaroka sy mpikaroka-mpampianatra ny fitondram-panjakana, izay midika ho fanaovana zinona ny mpianatra ety amin’ny anjerimanontolo Ambohitsaina sy ny tontolony. Ny SECES Sampana Antananarivo kosa dia mametraka ho ambony ny hoavin’ireo mpianatra malagasy no sady mitsinjo ny fahasahiranan’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra, noho izany dia nanapa-kevitra fa havoaka manontolo ny voka-panadinana taom-pianarana 2016-2017”.
Etsy ankilany, tsy hisy ny fampianarana taona 2017-2018 raha tsy mivaha ireo olana voatanisa etsy aloha, hoy ity sendika ity, sataria miantoka ny fitoniana ara-tsosialy, ny kalitaon’ny asa fampianarana sy fikarohana ary fahazoana vokatra tsara tsy mena-mitaha amin’ny any ivelany ny fivahan’ireo fitakiana ireo.
Nisy koa ny fepetra hirosoana, mba tsy hisian’ny fihoaram-pefy sy fanararaotam-pahefan’ireo mpitantana toeram-pampianarana sasantsasany, ka hihaona amin’izy ireo ny Birao SECES Sampana Antananarivo sy ny mpikambana vitsivitsy, mba hampahafantarana ny zo sendikaly sy ny manodidina azy.